Axmed Madoobe: Amisom ha furto xafiis gargaar – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Kismaayo – Mareeg.com: Hogaamiyaha maamulka KMG ee Jubba, Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa ugu baaqay howlaglak Midowga Afrika e AMISOM inuu magaalada Kismaayo ka furto xafiis qaabilsan arrimaha bulshada.
“Dowladaha AMISOM waxaan ka rabnaa iney magaalada Kismaayo ka furaan xafiisyadooda arrimaha bulshada oo sida banii’adanimada iyo caafimaad, oo waxa meelaha kale ay ka sameeyaan ay ka sameeyaan” ayuu yiri Axmed Madoobe.
Codsiga Axmed Madoobe ayaa yimid kadib markii roobab laxaad leh oo ka da’ay Kismaayo ay daadad kusoo jebiyeen qeybo ka mid ah magaalada, islamarkaana guryo badan biyo liqeen.
Axmed Madoobe ayaa tilmaamay in baahida ay udalbanayaan arintani ay tahay in shacabka magaalada Kismaayo ay doonayaan in laga caawiyo dhinacyada caafimaadka iyo adeegyada bulshada, maadaama roobabkii dhawaan ka da’ay magaalada Kismaayo uu saameyn ku yeeshay qeyb ka mid bulshada magaaladaas.
Waxa uu dhanka kale hogaamiyaha maamulka Jubba Axmed Madoobe uu fariin kale udiray dowladaha deriska la’ah Soomaaliya oo uu ka codsaday inay caawiyaan shacabka Kismaayo, iyo guud ahaan Jubbooyinka.
Ciidamada Amisom ayaa Banaadir, labada Shabeelle iyo Hiiraan ku leh goobo caafimaad oo dadka lagu daweeyo, hase ahaatee maamulka Axmed Madoobe ayaa sheegaya in Kismaayo uusan ka jirin adeeg nuucaas ah.
UN oo ku celiyay codsi $60 milyan oo loo rabo Soomaaliya